Akulula Ukuba Umuntu Othembekile | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UZixin wasedolobheni laseWuhan, esiFundazweni saseHubei
Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu nokulalela intshumayelo, ngafinyelela ekukuqondeni ukubaluleka kokuba umuntu othembekile ngase ngiqala ukuphila ngokuthembeka. Emva kwesikhathi esithile, ngathola ukuthi sengizuze ukungena ekubeni ngumuntu othembekile. Isibonelo: Ngenkathi ngikhuleka noma ngixoxa nomuntu othile, bengiye ngikwazi ukukhuluma iqiniso elisuka enhliziyweni; bengiye futhi ngithathe ukugcwalisa izibopho zami njengokubaluleke kakhulu, futhi uma ngidalule inkohlakalo bengiye ngikwazi ukuvuleka nakwabanye abantu. Ngenxa yalokhu, ngacabanga ukuthi ukuba ngumuntu othembekile kwakuyinto elula ukuyenza, futhi hhayi into elukhuni ngale ndlela eyenziwa sengathi ilukhuni ngayo ngamazwi kaNkulunkulu: “Iningi likhetha ukuba liyolahlwa esihogweni kunokukhuluma futhi lenze ukwethembeka” (“Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kwaze kwaba semva kwesikhathi lapho ngagcina sengikwazi ukubona ngisizwa yilokho esengidlule kukho ukuthi empeleni akulula ukuba umuntu ongcolile abe umuntu othembekile. Amazwi kaNkulunkulu empeleni ayiqiniso elimsulwa futhi awenziwanga neze ihaba.
Ngenkathi ngihlela ama-athikhili ngelinye ilanga, ngabona ukuthi udadewethu wethimba lokuhlela wayengcono kunami, kungakhathaleki noma wayengcono ngokubhala noma ngokuhlela ama-athikhili. Ngase ngicabanga: Kufanele ngiqinise isandla kakhulu kuma-athikhili ahlelwe nguye, uma kwenzeka ukuthi abaholi babone ukuthi yena uhlela ama-athikhili kangcono kunami hleze mhlawumbe bamkhuphule esikhundleni, nokungabeka esami isikhundla engcupheni. Emva kokuhlolisisa nokucubungula, ngabona ukuthi lokhu kwakukhombisa ukuxakaniseka ngodumo nenzuzo, ukuba nomona ngethalente leqiniso, kanye nokubandlulula labo abehlukile kimina. Ngesikhathi somhlangano, ekuqaleni ngangifuna ukuziveza inkohlakalo yami, kodwa futhi ngabuye ngacabanga: Uma ngikhuluma ngiveze izinhloso zami zobubi, ingabe umlingani engisebenza naye nodade womndeni osisingethe uzocabangani ngami? Ingabe bazothi inhliziyo yami yimbi yini nokuthi ngingumuntu okhohlakele ngokwemvelo yini? Khohlwa, kungcono ngingasho lutho. Kwakuwumcabango nje, futhi akusikho ukuthi ngangikwenzile vele. Kanjalo-ke, ngasho nje ngokunganaki ukuthi ngangesaba kakhulu kangakanani ukuba hleze ngigudluzwe esikhundleni uma ngibona ukuthi omunye umuntu wayehlela ama-athikhili kahle, ngenkathi ngifihle isimo sami seqiniso sobumnyama. Kamuva, ukusola enhliziyweni yami kwakhula kakhulu. Ngabe sengifunga ngaphambi kukaNkulunkulu ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka kanye kuphela, kanye nokuthi ngokulandelayo nakanjani ngangizokwenza njengomuntu othembekile.
Ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho, ngenkathi sizixoxela, ngezwa udade womndeni osisingethe ephawula ngokuthi odade ababili ababeke bahlala endlini yakhe (ngangibazi) babelunge kanjani, kodwa wangasho negama elilodwa ngokuthi mina ngangilungile noma cha, nokwangenza ngangenami kakhulu ngaphakathi. Ukuze ngimenze angibone njengomuntu ongcono, ngambalela uhla lwezici ezimbi ngalabo dade ababili ngamunye ngamunye, ngifuna kubonakale ukuthi babengalungile ukudlula mina. Emva kokusho lokhu, kwangicacela ukuthi lokhu engangikushilo kwakungalungile, nokuthi inhloso nenjongo yami kwakuwukudicilela phansi abanye bese ngiyaziphakamisa mina. Kodwa nganginamahloni kakhulu okuvuleleka kubona, ngakho ngathi kudade womndeni osisingethe: “Ngithe uma ngikuzwa uncoma labo dade ababili, ngabona sengathi unezithixo ezimbalwa enhliziyweni yakho, futhi yingakho kufanele ngingcolise isithombe sabo kancane ukuze uyeke ukubakhonza.” Kuthe nje lapho izwi lami lehla, udade engangisebenza naye wathi: “Lokho kuncike ekutheni ubunezinjongo ezimbi na ngokusho lokhu. Uma kunjalo, kusho ukuthi-ke ungumkhohlisi. Uma kungenjalo, lapho-ke kungashiwo ukuthi ube yisambulo senkohlakalo.” Ngithe uma ngimuzwa esho lokhu, ngaba nokwesaba okukhulu ukuthi bazoba nesithombe esimbi ngami, ngakho ngaphuthuma ngazama ukuchaza ebengikusho: “Bengingenazinjongo ezimbi. Ukuthi nje angizange ngikhulume ngendlela ecacile….?” Emva kwalokhu kucabanga okuyinkohliso, ngazizwa nginokucikeka ngaphakathi, futhi ngathi uma ngikhuleka ngazizwa ngilahlwa unembeza. Unamaqhinga kakhulu. Ukhuluma ngokungaqondile ngqo, uqhamuke namanga, bese wemboza iqiniso, ngaso sonke isikhathi ufihla futhi ufinyeze izinhloso zakho ezimbi nezinjongo zokuzikhukhumeza. Akukona ukukhohlisa uNkulunkulu lokho? Noma kunjalo, angizange ngiphenduke futhi ngicele uNkulunkulu angixolele. Kodwa isimo sikaNkulunkulu esingaphoxeki, futhi ukuyala kukaNkulunkulu kungekudala kwakuzokwehlela phezu kwami.
Ngosuku olulandelayo, ngavele ngaba nemfiva ephezulu kakhulu ngokungalindelekile, futhi wonke amalungu omzimba wami ayensonsotha. Ekuqaleni ngacabanga ukuthi ngingenwe umkhuhlane ngilele ebusuku kanye nokuthi ngingaba ngcono uma ngingaphuza umuthi. Kodwa ubani owayazi ukuthi ukuphuza umuthi kwakungeke kusize, nokuthi ezinsukwini ezimbili ezizayo ngangizobe sengingakwazi nokwehla embhedeni. Phezu kwalokho, ulimu lwami lwavuvukala futhi lwaqina, nomphimbo wami wavuvukala ngubuhlungu, okwakubuhlungu kangangokuthi ngangingasakwazi nokukhuluma. Ukugwinya amathe kodwa nje kwakunzima, angisakhulumi ngokudla-ke. Ngithe uma ngiqalwa yilokhu kugula, ngezwa nginokwesaba, futhi ngaqhubeka nokukhuleka kuNkulunkulu enhliziyweni yami. Ngaleso sikhathi, kwangicacela bha enhliziyweni yami: Ubani okuvumele ukuqamba amanga? Uma uqamba amanga kufanele ujeziswe. Ngale ndlela, ulimu lwakho ngeke lusona. Yilapho-ke okwangicacela khona ukuthi ukujezisa kukaNkulunkulu kwase kuphezu kwami. Ngaphangisa ngaxolisa kuNkulunkulu ngenhliziyo yami: “O Nkulunkulu, ngiyazi bengisephutheni. Ngicela ungixolele. Kulesi sikhathi nakanjani ngizovuleleka.” Emva kokuthandaza, ngaqaphela ukuthi ubuhlungu emphinjeni wami baba ngcono kakhulu. Noma kunjalo, uma umlingani wami nodade womndeni osisingethe befika bezongibuza ukuthi ngiguliswa yini isigubhukane kanje, ekuqaleni ngangifuna ukubatshela iqiniso lonke, kodwa ngabuye ngacabanga: “Uma ngivuleleka, ngidalule zonke izinto engangizishilo ngaphambilini zizoshayisana. Ingabe babezothi nginamaqhinga ngokwedlulele? Sasizohlalisana kanjani emva kwalokho?” Emva kokucabanga ngalezi zinto, nalapho ngangingenaso isibindi sokudalula iqiniso, ngavele ngathi ngokunganaki nje ngigule ngoba bengikhumbula ekhaya. Sebehambile, ngangakhululeki enhliziyweni yami kwaba sengathi kunommese ongisikayo. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ukukhohlisa kwakungangifikela kalula kangaka ngaphandle kokuthanda kwami. Ngalala embhedeni, ngizwa nginokucinana esifubeni sami kanye nokungakwazi ukuphefumula kahle, kwangathi sengizofa. Ngangesaba ukuthi ngizophelelwa umoya, ngakho phezu kwakho konke lokhu ngazihudula ngayovula isicabha sasegumbini ukuze kungene umoya. Ubani owayazi ukuthi ngizothi ngifika esicabheni, ngizwe inzululwane. Kwavele kwamnyama phambi kwamehlo ami ngenkathi imilenze yami iphelelwa amandla wase umzimba wami wonke waqubuka umjuluko. Ngokufutheka okukhulu, ngancika obondeni lwesicabha, umugqa wamazwi kaNkulunkulu adlula enhliziyweni yami: “Ngingavumela kanjani abantu bangiphange ngaleyo ndlela?” (“Isimilo Senu Sibi Kakhulu!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ebusweni bamazwi obukhosi nolaka lukaNkulunkulu, ngezwa ulaka lukaNkulunkulu lubhekiswe kimina, inhliziyo yami yavele yathuthumela ukwesaba. Isimo sikaNkulunkulu siphathwe ngendluzula, kodwa ngenxa yesikhundla sami emphakathini, izinga engikulona, kanye nokuziqhenya nokuzazisa, ngakhohlisa isikhathi sesifungo sami kulandelana, ngakhohlisa uNkulunkulu ngokungahlonizi. UNkulunkulu wayengangivumela kanjani ukuba ngimphathe kanje? Ngahefuzelela phezulu ngilokhu ngithi kuNkulunkulu enhliziyweni yami: “Kulokhu nakanjani ngizovuleleka …” Ngaphansi kwesiyalo nokujeziswa nguNkulunkulu, ekugcineni ngangingasenako okunye engingakwenza ngaphandle kokuba ngidalule udaba lonke kodade.
Kwaba ngokubhekana nalesi simo kuphela ukuba ekugcineni ngiwaqonde amazwi kaNkulunkulu “Iningi likhetha ukuba liyolahlwa esihogweni kunokukhuluma futhi lenze ukwethembeka” ukuthi nakanjani ayiqiniso futhi abhekiswe kubantu abangamaqili njengami. Njengoba isimo sami semvelo sobuqili sasijulile ngaphakathi kimina futhi sesiphenduke impilo yami, ukuba umuntu othembekile kimina kwakunzima ngisho nangaphezu kokugibela ngiye esibhakabhakeni. Ngangiye ngicabange ukuthi ukuba umuntu othembekile kwakuyinto elula, kodwa lokho kwakungenxa yokuthi ukwenza kwami kwakungabandakanyi izinto ezijulile emphefumlweni wami futhi kwakuwukuziphatha kwangaphandle ngaphansi kwezimo ezihlelwe ngaphambilini nokuthi izintshisekelo zami zazingeke zithinteke. Uma namhlanje sezithinteka izintshisekelo zami noma ikusasa nesiphetho sami kuthikamezeka, izinga lami nesithunzi, imvelo yami ingazambula futhi ngeke ngikwazi ukuba umuntu othembekile. Njengoba iqiniso liphambi kwami, ngaqala ukubona ukuthi ngempela akulula ukuba umuntu othembekile. Ikakhulukazi kumuntu oyiqili njengami, ngangingeke ngikwazi ukuba umuntu othembekile ngaphandle kokususa konke ukuzenzisa futhi nangaphandle kokuyala nokujezisa kukaNkulunkulu. Kusukela manje kuya phambili, ngizoqikelela ukufuna iqiniso, ngamukele wonke amazwi kaNkulunkulu, ngiqonde isimo sami semvelo sobuqili nangokunzulu, ngisuse konke ukuzenzisa futhi ngibe umuntu othembekile, ukuze ngiphile isimo seqiniso njengomuntu.
Okwedlule：Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
Okulandelayo：Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini